Occupied Ogaden: Jeel-Ogaadeen
Maxaad kala socotaa xabsiga loo yaqaano Jeel Ogaadeen – By Cabdulaahi Xuseen
Jeelka loo yaqaano Jeel Ogaadeen ee ku yaala magaalada Jigjiga dhinaceeda bari, waa jeel dhismo ahaan loogu tallo galay inuu qaado ugu badnaan ilaa 300 oo ruux, balse waxaa ku xidhan dhowr kun oo ruux oo isugu jira dhalinyaro, dad da’doodu aad u weyntahay, dumar iyo caruur ay qaarkood kuba dhasheen jeelka. Dadka ku xidhan halkaa qof ogsoon tiradooda ma jirto, xataa kuwa jeelka masuulka ka ah, ma ogsoona cadadka ugu xidhan halkaa, sababtoo ah dadka la keeno ee laga soo qabqabto miyiga iyo kuwii horey ugu jirayba qof dank a leh xadhiogooda iyo siidayntooda iyo sababta ay u xidhan yihiin ayaan jirin. Markaan aad u weydiinay dadka magaalada Jigjiga ku nool waxay ku qiyaaseen inta u dhaxaysa 5 ilaa 7 kun oo ruux. Maalmihii ugu dambeeyay ee lalahaa Cabdi iley ayaa go’aansaday inuu dadka maxasta ah ee halkaa ugu xareysan sii daynayo ayaa waxaa la’isugu keenay dad aan ka yareyn 12kun oo qof.
Kasokow, xidhayga bilaa macniga ah, jidh dilka iyo darxumada dadkaas tabarta daran ee Jeel Ogaadeen ku jira haysta, waxaa intaa dheer iyadoo ay qof walba oo meeshaas ku xidhan qoyskiisa guno iyo baad joogto ah ka qaataan ciidamada guumaysiga iyo kuwa dalaaliinta u ah. Iyagoo u sheegaya inay soo dayn doonaan ama ay u ogolaan doonaan inay tusaan amaba inta badan u sheega inay isaga/iyada gayn doonaan meel ka baxsan goobta loo yaqaano –Caqabada- oo ah meel la isku ciqaabo oo ay gayn doonaan meesha ay u yaqaanaan –Dibada- oo ah meel inyar kayara duwan meelaha la isku ciqaabo balse jeelka dhexdiisa uun ah, waxse u ma sameeyaan maxbuuska ee lacago umbay kag gurtaan marwalba dadka eheladooda la soo xidhay.
Qore: CabduLaahi Xuseen
Posted by Mohamed-Amin Amei at 10:47